हेर्नुहोस त राजधानी छिर्ने मुख्य राजमार्गका शौचालयहरु कति नाजुक छन् | Aanbookhairenipost
भगवान खनाल फागुन १३ धार्के धादिङ
तपाईले खाजा र खाना खाने राजमार्गको शौचालय कस्तो छ दुर्गन्धित पस्नै नमिल्ने मैलो र शौचालय भन्नै नमिल्ने । त्यति मात्र भएत हुन्थ्यो नी राजमार्गमा यात्रा गर्ने तपाई हामी यात्रुहरुले खाने खाजा पनि त्यहि शौचालय नजिकै वनाईन्छ । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका पृथ्वीराजमार्गको धार्के सिम्ले र नौबिसे जुँगेखोलाखण्डमा रहेका अधिकांश होटलका शौचालयहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । राजमार्गका आँधिखोला संयुक्त स्टाफ विश्वास गोर्खाली अन्नपूर्णा कवाँर राजधानी कान्तिपुर आदि होटलहरुका शौचालय निकै नाजुक अवस्थाका रहेका हुन् । खाजा र खाना घरका शौचालयहरु शौचादि गर्न सकिने खालका त छदैछैनन् त्यस्ता होटलका खानाले भंयकर महामारी फैलाउने देखिन्छ । चौबिसै घण्टा प्रयोगमा आउने होटलका शौचालयहरु नाजुक हुनाले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको हो । तपाईको घर नौविसेमा नहोला तर पक्कैपनि तपाईहरुले राजधानी जाँदा वा वाहिरिदाँ यस्ता किसिमका होटलहरुमा पसेर नास्त खाना त लिनुभएकै होला । त्यसैले यो तपाई हामीहरुका लागि अत्यन्त हानिकारक छ ।
शौचालयहरु बातानूकुलित नभएका साँघुरा सफा नगरिएका पानीको राम्रो प्रवन्ध नभएका छन् । शौचालयको बाहिरी बनावट छानो ढोका भित्ता निकै जिर्ण छ । शौचादि धुन राखिएका भाँडा निकै फोहोर र छुन पनि खिनलाग्ने छन् । प्राय होटलका शौचालयले निर्माण भएदेखि शौचालय सफा बनाउने हर्पिक ओडोनिल फिनेलको मुख देखेका छैनन् । किटाणु जिवाणुको बाक्लो संक्रमण भएपनि शौचालयको प्यान भाडाँकुडा चुकुल भित्ता सफा गर्ने पखाल्ने र रंगाउने गरिएको छैन् । ब्रस साबुन टाबेलको प्रबन्ध शौचालयमा छैन । शौचालयको अवस्था हेरेपछि कसैलाई पनि खाना र खाजा खान मन लाग्दैन । धेरैजसो होटलका सेफ्टी ट्यांकीहरु नभएका पिसाबलाई सिधै खोलामा वा बारीमा निष्काशन गरिएको छ । वरपरीका खानेपानीको मुहान खोला र वातावरण पुरै प्रदुषित बनेको छ । यसरी निष्काशित मलमूत्र होटलको भान्सा खानाखाने ठाउँ र स्टोर नजिकै छन् ।खाजा खान जादा बान्ता आउला जस्तो शौचालय छू यात्रु विमला विश्वकर्माले बताइन् । भोक लागेपछि खानैपर्ने रहेछू उनले भनिन् यस्ता होटलवालाई दण्डित गनुृपर्छ ।ू यस्तो खानाको मूल्य फेरी अन्तहेरी महँगो छ । उनी भन्छिन् सफा पनि छैन र उत्तिकै महँगो पनि छ ।
सौचालय को अवस्था
का कारण स्थानीय वातावरण दुषित बनेको बताउँछन् नौबिसेका बासिन्दा महेश भण्डारी । होटलवालाले पैसाको मुखमा मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउँछन् उनी । बलजफ्ती बस र माइक्रोबसले स्याट्याण्ड बनाएर यस्ता होटलमा गाडी रोकेपछि भोकाएका यात्रुले खाना र खाजा खान विवश भएका छन् । होटल संचालकहरुले यात्रुहरुको स्वास्थ्यमा कत्ति पनि ध्यान दिएका छैनन् । शौचालयको राम्रो प्रबन्ध गर्नुको साटो त्यसबारेमा जानकारी राख्न खोज्दा होटलका संचालक र कामदारहरु उल्टै रिसाउने झर्कर्ने आफ्नो सम्पत्तिको बारेमा अरुलाई चासो किन हुने जस्ता प्रश्न गर्छन् । नौबिसेस्थित विश्वास होटलका संचालक हरि नेपाल नाम परिवर्तनले भनें ूहोटलका शौचालयका बारेमा के लेख्नु ू शौचालयको फोटो खिचेर अनावश्यक प्रदर्शन नगर्न होटलका कर्मचारी धक्काउँदै थिए ।
बस र माइक्रोबसका चालकले आफूलाई भत्ता पाउने लोभले अस्वस्थ्ाकर होटलमा गाडी रोकेर खुवाउनेसम्पर्क बढाउने गर्नाले पैसा तिरेर खाने यात्रीहरुको स्वास्थ्यमा भने वेवास्ता गरिएको छ । राजमार्गका होटलहरुमा नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राजधानी प्रवेश गर्ने राजमार्गका होटलहरुको खाना र खाजाको कारण गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ । शौचालयको अवस्था निकै नाजुक भएपनि सरोकारवाला निकायहरु अहिलेसम्म मौन छन् । तै पनि अन्तमा राजमार्गको यात्रा गर्दा एकचोटी भने सोच्नुहोला । तपाई हरु लाइ कस्तो लाग्छ ?
2 comments on “हेर्नुहोस त राजधानी छिर्ने मुख्य राजमार्गका शौचालयहरु कति नाजुक छन्”
suny 04 -1
very nice working aanbookhairenipost team …gud job go on . and thanks again giving us this gud news aswell…
thanku very much .
This entry was posted on February 25, 2011 by aanbookhairenipost in स्थानीय समाचार/local news.